1) Clean nna ukwu
Nkowasi: The ụwa kasị tụkwasịrị obi Android Optimizer, Speed ​​Booster na Free Anti-Virus ngwa, Clean nna ukwu na-enyere mee ngwangwa na ọcha karịrị 400 nde igwe! Ọ na-enye ezigbo oge nchebe ya # 1 antivirus engine na secures gị onwe data na AppLock ọrụ.
Uru: Multi ọtọ, mfe iji, anabata ma dị ọcha ọrụ interface
Cons: ihe ọhụrụ ịgbakwunye mmezi na ihicha, ngwa njikwa bụ enweghị isi
Nkowasi: du Speed ​​Booster nwere ike inyere chebe gị smart ekwentị na free wuru na nche atụmatụ. Ọ ọcha gị usoro si na-achọghị faịlụ na enwekwu gị ohere nchekwa.
Uru: gbapụrụ ọsọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, na akwado ibu nke ngwaọrụ maka smart ekwentị mmezi, ụtọ ọrụ interface.
Cons: Ram ihicha nwere ike mgbe mgbe ka a mbipụta ole na ole n'ebe a na n'ebe.
3) SD odibo
Nkowasi: Ọ bụ a nchekwa na mmezi ngwa e mere iji onwe elu ohere na gị SD kaadị ma ọ bụ esịtidem ebe nchekwa. Uru: Ọ regains dị oké ọnụ ahịa na ebe nchekwa na-eme ọ dị ọcha na mma n'anya.
Cons: abịa na a "iji na ihe ize ndụ nke" ozi.
Nkowasi: Ọ gbapụrụ ọsọ n'elu ekwentị na ewepu junk n'enweghị, ọcha ngwa cache.
Uru: Free iji, dị ike usoro ihicha.
Cons: Dị ka ọ bụla cleanup ịba uru pụrụ ịkpata nsogbu ma ọ bụrụ na-eji overzealously.
5) Nova obubata
Nkowasi: ọzọ mmewere na ike-slowing gị Android ekwentị ala bụ omenala obubata na emeputa emewo arụnyere. Ọ bụrụ na ị na-ahụ niile mgbakwunye na doodads distracting, ma ọ bụ ka njọ, ọ bụrụ na ị na-ahụ na ha na-akwụsịlata ekwentị gị ala, tụlee-a customizable obubata dị ka Nova obubata. Ngwa ngwa na sleek.
Uru: Dị Ọcha Android ahụmahụ; kensinammuo ndozi; ngwa ngwa arụmọrụ.
Cons: ga-ahụ ọhụrụ gburugburu aka; ole na ole wijetị na nkwụnye-ins; nnọọ ole na ole pụrụ iche utịp.
Nkowasi: CPU tuner-enye gị ohere nyochaa na tweak gị CPU ịrụ ọrụ, hazie ntọala maka gị CPU gọvanọ, n'okpuru elekere ịzọpụta batrị, n'elu elekere ka mma arụmọrụ, na ịtọ dị iche iche triga dabeere arụmọrụ profaịlụ iji hụ na gị CPU rụrụ nnọọ ụzọ ị chọrọ.
Uru: Otu niile rounder n'etiti ya ndị asọmpi.
Cons: The ọrụ interface gaara mma.
Nwere ike ikwu kpakpando: 5
Nkowasi: 3c toolbox, amara na mbụ ka Android tuner, na-enye ọrụ na a ton nke diagnostic na tweaking ngwaọrụ na a savvy onye ọrụ nwere ike ahu nagide ịchọpụta ma melite ike nke ndị ha usoro. The toolbox agụnye a ọrụ njikwa jikwaa (ma ọ bụ igbu) gị ngwa, ndabere ma ọ bụ weghachi APKs.
Uru: Kemgwucha dị ike, mfe iji, abịa na ndị ọzọ ọrụ na ị pụrụ n'ezie iji, ugbu a na-ere
Cons: ikikere na ohere mgbochi.
8) Ngwaọrụ Control
Nkowasi: Ngwaọrụ Control bụ usoro tweaking na ngwaọrụ nlekota oru ngwa na-ewe uru nke elu ikikere nke a gbanye mgbọrọgwụ ngwaọrụ ka ị tweak ọtụtụ ngwaọrụ na OS ntọala. Ọrụ nwere ike hazi CPU na GPU frequencies karịrị ma ọ bụ n'okpuru elekere, nwee ma ọ bụ gbanyụọ ngwaọrụ kpọmkwem atụmatụ dị ka akụ aka-On na vibration ike.
Uru: App enye ndị nne na nna ịchịkwa remotely igbachi na Ị kpọghee ekwt ha igwe, a ngwọta maka nsogbu nke ụmụ adịghị alaghachi nne na nna si oku nke iji maa.
Cons - Gaje Ịbụ vulnerability ka a uninstalled na nwata, quirky na nwere ike iji n'ozuzu Polish na onye ọrụ ahụmahụ na onye ọrụ interface.
Nkowasi: ezie na Android ntọala menu na-enye ọrụ na ụfọdụ ghọta na batrị ọnọdụ na ole ike bụ na ojiji, nyochawa dabeere ọrụ nwere ike inwe nnọọ ihe keukwu ọmụma na ngwa ọdịnala dị ka BetterBatteryStats.
Uru: Easy "Ebuli" button gbatịrị batrị ike; pro version agụnye preset ike ụdịdị nke nwere ike ahaziri, ọtụtụ Monitors na stats banyere batrị.
Cons: Nghọta nsogbu
Nkowasi: Greenify ihu ọma na-ewepụta na-eji ngwa na a steeti ino na mkpu, enweghị ike iji nweta usoro ego, bandwit ma ọ bụ na-agba ọsọ ndabere Filiks. Otú ọ dị, Greenify-enye gị ohere na-agba ọsọ na-eji ngwa ejikari na mgbada mgbe n'ụzọ doro anya na a na-akpọ onye ọrụ enweghị ihe ọ bụla mmezi nsogbu oge.
Uru: Responsive na-adị mfe navigable UI, akpaaka analyzer amamihe choputara akụ hogs na ezigbo ngwa.
Cons - Chọrọ mgbọrọgwụ ohere. All ndabere ngwa arụmọrụ akwụsị mgbe ihe ngwa bụ na ino na mkpu, nke a pụrụ ijere ụfọdụ ngwa ọdịnala na-abaghị uru dị ka Mkpu, na-elekọta mmadụ na netwọk ngwa.
Otú nyefee Data si gam akporo ka Blackberry
> Resource> Android> 10 Best Optimizers maka Android